सरकार, यस्तो विकास गर्ने ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार न्यूनिकरण नगरेसम्म न सुशासन आउन सक्छ, न समृद्धि नै । यो सरकारके प्रमुख लक्ष्य सुशासन र समृद्धि हो । सपना मोनोरेल, चुच्चेरेल, पानीजहाज, हावाजबाट विजुली जे जे देखे पनि सम्भव छ, गर्दैजाँदा सफल पनि हुनसकिन्छ, तर भ्रष्टाचार बाधा हो । भ्रष्टाचार यति बलवान छ कि राज्यसंयन्त्र नै भ्रष्टाचारीको नियन्त्रणमा देखिन्छ । भ्रष्टाचारीसँग सरकारसमेत डराएर निर्णय गर्न नसक्नु असफलताको परिचायक हो ।
एउटा ठेकेदार यहाँसम्मको लापरवाही गर्छ, तैपनि उसैले अरु ठेक्काहरु पाउँछ कसरी ? बन्दै गरेको पुल भाँचिन्छ, कर्मचारी ठेकेदार डराउँदैनन्, किन ?
बबई पुल यसरी ठनक्कै भाँच्चियो । किन भाँच्चियो भन्ने सम्बन्धमा पुल इन्जिनियरहरु नै १६ मिटर गहिराईमा हाल्नुपर्ने फाउण्डेशन ५ मिटरमा हालेर भ्रष्टाचार भएपछि पुल भाँच्चिनु स्वभाविक हो । भ्रष्टाचारको नमूना पनि हो ।
बबईको यो पुल पनि पप्पु कन्स्ट्रक्शन कम्पनीले बनाएको रहेछ । वर्षाको मौसम, पुल निर्माण सकिने अवस्थामा थियो, साउन २९ गते पुल ५ ठाउँमा एक्कैपटक भाँचियो । पुल किन भाँचियो भन्ने सम्बन्धमा इन्जिनियरको रिपोर्ट आयो– पुल निर्माणमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले चरम लापरबाही गरेको छ । जसरी निर्माण हुनुपर्ने हो, भएको छैन । गुणस्तरहीन सामानको प्रयोग भएको छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्शन कम्पनी त्यही कम्पनी हो, जसले एउटा काम नसकी, थुप्रै ठेक्का पाउँछ र सबैमा गुणस्तरीय काम गर्दैन । अरु त अरु राजधानीको कालिमाटी–नेशनल ट्ेरड्रिङवीचको पुल समेत गुणस्तरहीन बनायो । सबैले आलोचना गरिरहदा, रङरोगन लगाएर पुल चालु गरिदियो । सिंहदरवारको छेवैमा यसरी भ्रष्टाचार गर्ने कम्पनी, जसका मालिक सांसदसमेत छन्, सेटिङमा ठेक्का लिने र भ्रष्टाचारमात्र गरिरहन्छन्, सुशासन र समृद्धि कसरी आउला प्रधानमन्त्रीजी ?
अनुगमन टोलीले यो भाँच्चिएको पुललाई पुननिर्माण गराउनु भन्दा रेट्रोफिट गर्न सुझाव दिएको छ । १६ वटा पिलर कामै नलाग्नेगरी ध्वस्त भएको पुल मरमत गर्न सुझाव दिनु आफैमा रहस्यमय हो । ठेकेदारले यो पुलको पुननिर्माण नै गर्नुपर्ने हो । तर सडक विभागका भ्रष्टहरु ठेकेदारलाई फाइदा गराउने कुरा गरिरहेका छन् । देशमा ठेकेदारीमा कस्तो काम हुन्छ, सरकारी कर्मचारी ठेकेदारसँग मिलेर कतिसम्मको लापरवाही गर्छन् भन्ने नमूना पनि यो पुल बनेको छ ।